Agrad sy Skaiz 6 7. News La ‘Génération B Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Mr Sayda Misié Sayda 10 2.
Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Tann Faya 4 Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Ho namako ianao feat Twokii 13 Alaivo eto ny Code.
Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira. Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o?? Ramano be Galona 6. Ramano be Galona 7. Mitia mangina 19 3. Mba marina anie 19 4. Efiko parsi 19 5. Adala an’i jesosy 14 8. Tsy atakaloko 13 9. Ho namako ianao feat Twokii 13 Mr Sayda Misié Sayda 10 2.
Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Tenz izao. Fandraisana Fanorotoroana Tenw ny takelaka Lisitra Hiditra.